Home » Featured » KHQ-TV Supercharges Dijital Video ah oo leh FUEL, Xarunta Dhexe ee Cirka Dhibaatada Xawilaadda
Dhowr bilood ka hor ayaan ku qoray maqaal ku saabsan Xarunta dhexe, bixiyaha ugu weyn ee nidaamyada warfaafinta warfaafinta ee loo yaqaano hawlgalada warbaahinta ee waxtarka leh iyo FUEL ee aadka loo sugayoTM xalka dijitaalka. FUEL waxay awood u leedahay oo u suurtogelin kartaa saldhigyada tv-ga iyo bixiyeyaasha content inay bixiyaan dakhliyada cusub ee dakhliga iyagoo siinaya daawadayaasha si ay u daawadaan wargeyska laga bilaabo bilowga wakhti kasta oo ay rabaan, si gaar ah u eegaan doorbidooda aragtida TV-ga, telefoonka, kiniiniyada ama kombiyuutarka. FUEL waxay ka caawisaa in ay ka gudubto la'aanta jeelka YouTube, Facebook iyo wixii la mid ah adigoo udheereya sheekooyin ku saabsan warbaahinta bulshada iyo ka faa'iideysiga mashiinka telefishanka. Tani waa bedelaad beddelaad waqti gaaban oo loogu talagalay wariyeyaasha iyo shirkadaha warbaahinta sababtoo ah FUEL waxay siinaysaa qalabka saxda ah, alaabooyinka saxda ah iyo falanqaynta saxda ah si ay ufududiso mawduucooda iyo xayaysiisyada dhammaan mashaariicda. Iyadoo taas la yiraahdo, Waxaan sugayay ilmo hore u guursaday si aan u ansixiyo tiknoolijiyada iyo saadaasheyda. Nasiib wanaag, uma baahnin inaan sugo muddo dheer Xarunta dhexe ma niyad jabin.
Cowles Broadcasting ee QQ ee Spokane, WA, ayaa dhawaan la isku daray Xarunta dhexe'FUEL' -da '' FUEL '' '' '' KHQ waxay u baahnayd waddo sahlan si ay u abuurto dakhli cusub oo digital ah oo ka faa'iideysanaya hantidooda hadda jirta taas oo kor u qaadi doonta ka-qaybgalayaasha sawir-qaadaha, oo abuuraya waxyaabo badan oo xayeysiin ah. Ka dib markii ay si taxadar leh ugu sameeyeen fursadaha farsamada cilmi-baarista, KHQ waxay u jeestay Xarunta dhexe si ay uga faa'iideystaan ​​FUEL's Linear on DemandTM socodka hawsha kanaalka iyo otomaatigga, taas oo si qaldan u soo bandhigaysa sheekooyinka dhamaan qalabyada iyo goobaha dijitalka ah ee qof kasta oo daawadeyaal ah.
"Aad ayaan ugu faraxsannahay inaan isku xirnaanta qaabkan isbeddelka ah ee tirakoobka si aan u badalno muuqaalka warbaahinta," ayuu yiri Neal Boling, oo ah madaxa fulinta Cowles. "Waxaan rajeyneynaa inaan aragno inta ay FUEL awood ugu yeelan karto in ay kordhiso dakhliga cusub ee digital-ka iyada oo la adeegsanayo hantidayadii hore. Waa waqtigii dakhliga dijitaalka ah ee la joogo milkiilayaasha macaamiisha ah, FUEL waxay sidan u sameyneysaa annaga, "ayuu raaciyay Boling. Mr. Boling wuxuu soo bandhigay shirkii ugu dambeeyay ee warfaafinta News Technology isagoo ka hadlayay farsamadii uu ku guuleystay ee FUEL ee howlaha isku-dhafan ee digital-first, mashiinnada dhinaca server-ka ah ee wargeysyada nool, iyo bixinta content sida habka loo isticmaalo daawadayaasha si dhakhso ah, bedelida xayeysiisyada hawada oo leh xayeysiin dijital ah.
Fred Fourcher, Xarunta dhexeAasaasaha iyo CEO ayaa sheegay in shirkaddu ay ku faraxsantahay inay aragto KHQ ka faa'iideysashada qaabka FUEL. "Cowles waa kulan weyn oo loogu talagalay FUEL sababtoo ah saldhigyada kala duwan iyo rabitaankooda in ay ka faa'iidaystaan ​​oo ay ballaariyaan waxoogaa dijitaal ah ee shirkadooda," ayuu sii raaciyay Fourcher. "FUEL waxay bixisaa waayo-aragnimo shakhsiyadeed oo shakhsiyadeed ah iyada oo la adeegsanayo TV-yada, taasoo keentay in mudada dheer ee aragtida, taas oo kor u qaadaysa kobcinta macaamiisheena" content content video. "
Ka dib ku dhowaad labaatan sano oo xarumo TV ah oo ay ku jiraan internetka, warbaahiyayaashu waxay gaarayaan kaliya qayb yar oo ka mid ah dakhliga internetka ee laga yaabo inay suurtogal noqdaan. FUEL waxay u rogeysaa in ay la socoto wacyigelinta sahlan ee gaaban, oo loo yaqaan 'workflow end-to-end' taas oo sahlaysa in ay "rogaan jidka shakhsi ahaaneed" - oo ay weheliso waayo-aragnimo weyn oo muuqata ayaa keeneysa wakhtiga duruufaha 4X. Khadadka hoose ee TV-yada waa waqtiyo badan oo la daawado, xayeysiisyo badan, iyo dakhli dheeraad ah. Ma aha dhacdo aad u xun oo guuleysi ah.
Spears & Fiilooyinka Ultra HD Forum xaqiiqada dalwaddii	2018-10-17
Previous: M & E Evolution wuxuu ka caawinayaa dhammaan Sawirada Sawirada Muuqaalka
Next: V-Nova wuxuu maalgashiga maalgashiga maalgashiga ka helay Novator Partners